GPS029W - Fanaraha-maso GPS tsy misy rano OMG ho an'ny ankizy | Singapore Top Mini GPS Tracker manokana ho an'ny autisme / Autistic Kids & Dementia Anti-panahy
• Ity fitaovana ity dia manohana ny GPS, WIFI ary LBS ny karazana toerana rehetra; GPS dia indrindra ho an'ny fipetrahana ivelan'ny trano ary rehefa tsy tsara ny fandraisana, dia hiverina amin'ny LBS izy. Ny Wifi dia indrindra ho an'ny toerana ipetrahana anaty trano.
• Ity fitaovana ity dia hitazona firaketana mandritra ny telo volana hatramin'ny telo volana, ny ray aman-dreny dia afaka manamarina ny rakitsoratra amin'ny smartphone na amin'ny alalan'ny Internet.
• Feo Geo: Afaka mametraka faritra iray ny fianakaviana, ary hahazo fampandrenesana izy ireo rehefa tonga any ivelan'ny faritra ny ankizy / mpitsabo.
• Ity fitaovana ity dia miantso ny bokotra ary fomba roa amin'ny feo, ny mpianakavy sy ny ankizy dia afaka mifampiresaka tahaka ny finday iray.
• Tsindrio ny bokotra Call amin'ny gitara GPS mba handraketana ny feo sy handefa izany amin'ny smartphone.
* Fikarohana marobe - GPS / AGPS / GSM / WiFi.
* Fotoan-tsarotra marina - Fandraisana feo sy fandefasana hafatra Feo.
* Nomeraon'ny fianakaviana –Afaka mametra laharana 10 (ray / reny), isa 3 SOS ary isa fanaraha-maso 1 ianao.
* Toeram-piarovana –Mialà faritra iray eo amin'ny sarintany amin'ny alàlan'ny APP, dia hisy ny fanairana raha vantany vao mivoaka ny faritra ny zanakao.
* Hitady ny fiambenana - alefaso ity fiasa ity, hanaitra ny famantaranandro ary ho hitanao mora foana izany.
* Makà namana - Fiaraha-miambina roa miaraka dia afaka manampy tsirairay satria ny fifandraisana afaka miantso sy miresaka amin'ny Voice.
* Atsaharo ny fampitandremana amin'ny alina –Ny famantaranandro dia handefa hafatra hanara-maso ny laharana rehefa nesorina ny fiambenana.
* Ampio fitaovana - Afaka manampy fitaovana hafa ianao eto ary mitantana fitaovana roa samy hafa ao amin'ny kaonty iray.
* Toeram-pijerem-pitaratra an-dàlana - Azonao atao ny mamerina ny lalan'ny zanakao ao anatin'ny 3 volana lasa.
* Fomba fanehoana - Azonao atao ny misafidy maody roa samy hafa, ny maody fitehirizana herinaratra dia mahatonga ny fiainana bateria lava kokoa. Ny maody fanaraha-maso dia hanana toerana fanarahana bebe kokoa fa mila hery bebe kokoa.
* Alarm clock - Famantaranandro fanairana telo samihafa hamaly ny fangatahanao samihafa.
* Voice monitor - Ny famantaranandro dia mila mametraka laharam-pahamehana aloha. Rehefa avy nanome baiko ny mpanara-maso dia miantso ny lahara-maso.
* Geo-fefy - Azonao atao ny mametraka Geofence ho an'ny zanakao, handefa fanairana izy raha vao mivoaka ny fefy ilay zaza.
* fampiharana - Tsindrio ny bokotra fangatahana ary azonao atao ny mametraka ny anaran'ny fitaovanao, ny nomeraon'ny fianakaviana, manova tenimiafina sns sy ny fiasa.
* fahasalamana –Ankoatra ny isa isa, habetsaky ny Fanatanjahan-tena, fanatanjahantena fitsangatsanganana. Ampidiro ny sensor 3D ao anaty famantaranandro, hanisa ny dingana feno fahendrena izy io na miasa na mihazakazaka.
* valisoa–Mandefasa “tia” amin'ny ankizy mba hanana fitondran-tena tsara.
Zava-mitranga madinidinika mitera-jaza madinika
Display: Hizaha 1.4 inch
Network 3G: WCDMA (900 / 2100)
Battery: Lithium batterie 600mAH
Fotoana fohy: 3 andro
SIM karatra: Micro SIM karatra
Fanaraha-maso lavitra: Support
Tsy tantera-drano: IP67 waterproof
* S198 $ 6 (Warranty XNUMX Volana) ihany
Fanoherana tsy misy rano
19503 Total Views 1 Views Today